एपी वानले कार्यक्रम निलम्बन गरेपछि युट्युवमा आयो रजतपट, छवि-शिल्पाकै बारेमा फेरी प्रकाशले बनाए यस्तो कार्यक्रम ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 24, 2021 AdminLeaveaComment on एपी वानले कार्यक्रम निलम्बन गरेपछि युट्युवमा आयो रजतपट, छवि-शिल्पाकै बारेमा फेरी प्रकाशले बनाए यस्तो कार्यक्रम ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
एपी वान टेलिभिजनले प्रशारण गर्दै आएको रजतपट कार्यक्रम निलम्बनमा परेको छ । यो कार्यक्रम प्रकाश सुवेदीले संचालन गर्दै आएका छन् । टेलिभिजनवाट निलम्बनमा परेपछि प्रकाशले कार्यक्रम रजतपट युट्युव मार्फत प्रशारण गरेका छन् । उनले टेलिभिजनमा कार्यक्रम निलम्बनमा परेपछि आफुले युट्युव मार्फत प्रशारण गरेको बताएका छन् ।
फेरी पनि उनले शिल्पा र छविका बारेमा भएको अदालती विवादका बारेमा कार्यक्रम बनाएका छन् । जुन विषयमा विवाद भएर कार्यक्रम टिभीले हटायो उनले युट्युवमा पनि सोही विषयलाई कार्यक्रम बनाएका छन् । उनले फेरी पनि आफुले टेलिभिजनमा सत्यकुरा मात्र बोलेको दावी गरेका छन् । उनले शिल्पाले भनेजस्तो कुनै पनि कपोकल्पित नभएको पनि बताएका छन् ।
उनले शिल्पालाई नै कमजोर देखाउँदै च रि त्रका बारेमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । उनले शिल्पा छविसंग विवाह गर्नु अघि नै विवाहित भएको दावी गरेका छन् । जुन कुरा छविले पनि आफुलाई थाहा नभएको बताएका छन् । शिल्पा र छविको सम्बन्ध विच्छेदको विषय अहिले अदालतमा विचाराधिन छ । छवि शिल्पालाई सम्पत्ती दिन नचाहेका कारण उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदको मु द्दा दुई वर्ष देखि अल्झिएको छ ।
प्रकाश सुवेदीले भोजपुरी फिल्म निर्माता सोनु खत्रीसंग नाम जोडेर शिल्पालाई आरोप लगाएपछि शिल्पा सबैभन्दा बढी रिसाएकी छन् । सोनुको श्रीमती कोमलले केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक एउटा भिडियोलाई प्रकाशले प्रशारण गरेका थिए । कोमलले भने त्यो भिडियो पुरानो भएको बताएकी छन् । थप भिडियो हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोलाः